यूएईमा नेपाली क्रिकेटरले खेल जिते, स्टेडियम सफा गरेर दर्शकले मन जिते…(तस्बिरसहित) « Online Tv Nepal
यूएईमा नेपाली क्रिकेटरले खेल जिते, स्टेडियम सफा गरेर दर्शकले मन जिते…(तस्बिरसहित)
Published :2February, 2019 8:29 am
On : खेलकुद
यूएई – युएईमा जारी टी–२० शृङ्खला अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा नेपाल ४ विकेटको रोमाञ्चक जित हात पार्‍यो ।
झण्डै १८ सय जना नेपाली दर्शकले खचाखच भरिएको खेल मैदानको छेउमा नेपाली बाजागाजा घन्किएका थिए । लय छोडिसकेको खेललाई नेपाली ब्याट्सम्यान दिपेन्द्रसिंह ऐरी र पवन शर्राफले जितसम्म पुर्‍याए । नेपाली झण्डा फहराउँदै खेलाडीलाई हौसला प्रदान गरिरहेका नेपाली दर्शक निराश भएनन् ।
शुक्रबार यूएईमा सार्वजनिक बिदाको दिन थियो । यूएईविरुद्द एक दिवसीय सिरिज जितेसँगै नेपाली क्रिकेटको आईसीसी वरियता क्रममै प्रवेश भएको छ । र अहिले नेपाली क्रिकेटको चर्चा चुलिएको छ ।
दुबईको आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट एकेडेमी मैदानमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले ४ विकेटले यूएईलाई हरायो । अन्तिम ओभमा सात रन आवश्यक थियो । तीन बल बाँकी रहँदै खेल नेपालले जित्यो । दशर्कको हुटिङले रंगशाला गुञ्जायमान भयो ।
एक दिवसीय सिरिज जितेकै खेल मैदानमै टी–२० को दोस्रो खेल रोमाञ्चक लयमा नेपाली टोलीले आफ्नो पक्षमा पार्यो र टी–२० सिरिज पनि जित्ने बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्‍यो ।
दोस्रो टी–२०: नेपालले यूएईलाई ४ विकेटले हरायाे
शुक्रबार खेल हेर्न पुगेका दर्शक खेल अवधिभर बाजागाजा र नेपालको राष्ट्रिय झण्डासहित रमाइलो गरिरहे । खेल हेर्न गएका धेरै दर्शक स्थान अभावका कारण गेटबाटै फर्काईए । खेल सकियो । खेलाडीले मैदान छोडे । खेल हेर्न पुगेका धेरैजसो दर्शक हतार–हतार गरेर कोठा फर्किए ।
स्टेडियम पानी तथा जुसका बोतल, खाजा नास्ताका प्याकेटले फोहोर थियो । नेपाली क्रिकेट समर्थक समाज यूएईको टोलीले कालो प्लास्टिकको झोला समाएर स्टेडियममा भएको फोहोर संकलन गरे । खेल मैदानछेउ सफा बनाए ।
सरसफाइका लागि आयोजकले व्यवस्थापन गरेको भए पनि नेपालीको पहिचानका लागि आफूहरुले सबै खेलपछि स्टेडियम सफा गर्ने गरेको समाजका सुमिर न्यौपानेले उज्यालोलाई बताउनुभयो ।
खेलाडीले यूएईको भूमिमा उसैलाई हराउँदै खेल जिते । त्यही खेल हेर्न पुगेका नेपाली क्रिकेटप्रेमी दर्शकले सबैको मन जिते । उज्यालाे अनलाईन बाट
उपाधिको लागि नेपाल र पपुवा न्यूगिनी भिड्दै । के नेपालले जित्लात उपाधि ?
त्रिकोणात्मक टी-२० श्रृंखलाको उपाधिका लागि नेपालले आज पपुवा न्यूगिनी (पीएनजी) विरुद्ध खेल्दैछ । खेल कीर्तिपुरस्थित
पीएनजीविरुद्ध नेपाल पाँच रनले पराजित
काठमाडौं, ११ चैत । पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले पपुवा न्युगिनी (पीएनजी) सँग पाँच रनले
आज हुने खेलमा नेपालले क्यानडालाई पराजित गरे नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्ने छ ।
काठमाण्डाै – आईसीसी टी–२० विश्व कप क्रिकेटको ग्लोबल छनोट ‘ए’ को तेस्रो खेलमा नेपालले आज
खुशीको खबर विश्वकप छनोट : बलिङमा चम्किँदा नेपालको विजयी सुरुवात
काठमाडौं – ओमानमा जारी टी-२० विश्वकप ग्लाेवल क्वालिफायरअन्तर्गत नेपालले पहिलाे खेलमा विजय हासिल गरेकाे छ
आफ्नै वडामा स्थापित तेस्रो, बालेनले झण्डै दोब्बर मतले अगाडि…..(भिडियो सहित)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले उनका प्रतिस्पर्धि केशव स्थापितको वडामा पनि झण्डै दोब्बर मतले
आफ्नो ‘राजनीतिक गुरु’ को प्रतिनिधि बस्न ललितपुरको मतगणनास्थल पुगे बालेन !
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन) ललितपुर महानगरपालिकाको मत गणना स्थलमा प्रतिनिधिका रुपमा
मनोज कुमार आचार्यको ईश्वरपुरको मेयरमा निरन्तर अग्रता !
ईश्वरपुर नगरपालिकाको जारी मतगणना अन्तर्गत सूरुदेखि नेपाली कांग्रेसका मेयर उम्मेद्वार मनोज कुमार आचार्यले अग्रता लिईरहेका
आफ्नै वडामा स्थापित तेस्रो, बालेनले झण्डै दोब्बर मतले अगाडि…..(भिडियो
आफ्नो ‘राजनीतिक गुरु’ को प्रतिनिधि बस्न ललितपुरको मतगणनास्थल पुगे
स्थापितकै वडामा पनि पहिलो नम्बरमै बालेन, झण्डै ६ हजारको